malware ဒေတာပါသော Android လုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာသစ် Androidsis
ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ရမှာက Android ဖြန့်ဖြူးတဲ့ဒေတာကိုလစဉ်ထုတ်ဖြန့်ဖြူးပေးတယ်။ ဂူးဂဲလ်သည်လစဉ် အခြေခံ၍ အစီရင်ခံစာအသစ်များကိုအသုံးပြုသူများနှင့်မျှဝေမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့က Play Store တွင်သိုလှောင်ထားသော (သို့) သုံးစွဲသူဖုန်းများပေါ်တွင် install လုပ်ထားသောအန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများရှိနေတာကိုသိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဂူးဂဲလ်ဟာလုံခြုံရေးရှုထောင့်မှာအများကြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်။ Play Protect ကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအပြင်, ဖုန်းလုံခြုံရေးပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများတိုးမြှင့်ပါပြီ Android One ရှိသူများကဲ့သို့။ လစဉ်ထုတ်ဝေရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ဤအစီရင်ခံစာသစ်သည်အန္တရာယ်ရှိသောအသုံးချပရိုဂရမ်များမည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုသိရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သူတို့ကမကြာခဏထဲမှာထင်ရှားလိမ့်မည် အလားအလာအန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ကြောင်း applications များ၏ရာခိုင်နှုန်း ဒီဖုန်းကို Android ဖုန်းတွေမှာ install လုပ်ထားတယ်၊ ဘယ် operating system ဗားရှင်းတွေ၊ ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရတာများတယ်။ အခြေအနေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်သတင်းအချက်အလက်။
2 Android လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပ်များ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အင်္ဂလိပ် PHA (အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များ) တွင်လည်းအတိုကောက်အားဖြင့်လူသိများသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ရှိနိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။ ဂူဂဲလ်က လျှောက်လွှာတစ်ခု၏အန္တရာယ်အဆင့်ကိုတွက်ချက်ရန်တာ ၀ န်ရှိသော algorithm။ အကယ်၍ algorithm သည်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းညွှန်ပြပါက၎င်း app သည်လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မည်။ သို့မှသာ၎င်းသည်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့ application အချို့တပ်ဆင်ထားသည့် Android ဖုန်းများ၏စုစုပေါင်းရာခိုင်နှုန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကို Google Play မှဒေါင်းလုပ်လုပ်သူများနှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုသူများနှင့်မတူပါ။ ဤကိန်းဂဏန်းများအရစက်တင်ဘာလတွင် ၀.၀၉% Play Store မှအက်ပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသောသူတို့တွင်၎င်းတို့တွင်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။ အခြားအရင်းအမြစ်များမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲလျှင်အနည်းငယ်တိုးပါ၊ ၀.၆၁% အထိတိုးပါ။ အလွန်လုံခြုံအခြားရွေးချယ်စရာစတိုးဆိုင်ရှိပါတယ်ပေမယ့်.
Google ကမှတ်ချက်ပေးသည် ဒီကိန်းဂဏန်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလျော့ကျလျက်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီမှမိတ်ဆက်ပေးသောလုံခြုံရေးအစီအမံများကဤအပလီကေးရှင်းများကိုစတိုးမှဖယ်ရှားရာ၌အထောက်အကူဖြစ်ပုံရသည်။ အသုံးပြုသူများကသူတို့ကိုသတင်းပို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေအပြင်.
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဂူဂဲလ်ကပြသခဲ့သည် Android ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ application အရေအတွက်။ ဤ application သည်မည်သည့် operating system တွင်မည်သည့် version သည်အများဆုံးသက်ရောက်သည်ကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသောသတင်းအချက်အလက်အပိုင်းအစ။ ယခင်ဗားရှင်းများသည်အထိခိုက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။
အပေါ်ကဂရပ်မှာကြည့်နိုင်တယ် Lollipop သည် ၀.၆၆% ဖြင့်အမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။။ Marshmallow သို့မဟုတ် KitKat ကဲ့သို့သောအခြား Android version များသည်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကိစ္စမှာနားလည်နိုင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလုံခြုံရေး patch တွေကိုမရရှိတော့တာကြောင့်ဒီ application အချို့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားတွေကိုပိုပြီးအားနည်းသွားစေတယ်။
ထိုကွောငျ့, သင်ထည့်သွင်းထားသော Android ဗားရှင်းအသစ်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းများမှာနည်းသည်။ ဂူးဂဲလ်ကမူဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုနှင့်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားခြင်းကြောင့်တိုက်ခိုက်မှု (သို့) malware များ၏သားကောင်ဖြစ်ခြင်း၏အခွင့်အလမ်းလည်းနိမ့်ကျသည်။ လက်ခံရရှိကြောင်းလစဉ်လုံခြုံရေးပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအပြင်။
သုံးစွဲသူများနှင့်ဂူဂဲလ်မျှဝေသောနောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်မှာနိုင်ငံအလိုက်လုံခြုံရေးဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စားသုံးသူများမှအန္တရာယ်ရှိသည့်လျှောက်လွှာများဒေါင်းလုပ်ချခြင်းပိုမိုများပြားသည့်နိုင်ငံများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အိန္ဒိယသည် Android အသုံးပြုသူအများဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၀.၆၅% ရှိသည်။
ကျန်နိုင်ငံများမှာလည်းဂူဂဲလ်ကိုမျှဝေလိုက်သည်ဤစာရင်းတွင်အိန္ဒိယပြီးနောက်။ ဤနိုင်ငံများမှာယူနိုက်တက်စတိတ် (၀.၅၃%)၊ ဂျပန်နှင့်ရုရှား (၀.၂၇%)၊ မက္ကဆီကို (၀.၂%)၊ ဘရာဇီး (၀.၁၇%)၊ ဂျာမနီ (၀.၁၁%) နှင့်နောက်ဆုံးတွင်တောင်ကိုရီးယားနှင့်တူရကီ (၀.၁%) တို့ဖြစ်သည်။
ဒါဟာမျှော်လင့်နေသည် ဒီ Android လုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာကိုလစဉ်ဝေမျှသွားမှာဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ Android ဂေဟစနစ်မှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေဘယ်လိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကြည့်ရတာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Google မှလုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာအသစ်ကို Android တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်